အိမ် - လုံးချင်းအိမ် အရောင်း Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: လုံးချင်းအိမ် အရောင်း
#ငွေဆောင်အိမ်_ခြံ_မြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ 🌈တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ချယ်ရီဥယျာဉ် အိမ်ရာလမ်း ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ . . .ရှင့်🙏🙏🙏 🌟 နေရာကောင်း၊ လမ်းကျယ်/လမ်းသန့်။ 🏡 အကျယ်အဝန်း (30´×60´) ,2- RC, 3-BR. 🏡 2-ထပ်တိုက်၊ အိပ်ခန်း ၃ ခန်း။ ကျွန်းပါကေးခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး။ ရပ်ကွက်သန့်၊ လမ်းသန့်။ 📣အပေါ်/အောက် 🛀ရေချိုးခန်း🚽အိမ်သာပါသည်။ 💰💰💰ဈေးနှုန်း _ ၂၃၀၀ သိန်း 📲📲📲📲📲 09-752 7575 47, 09-7789 69 226. 09-250 998 522. 09-340 18 51 31.